USolwazi Kavilan Moodley emi eduze komfanekiso wedishi wakwa-MMS esizeni sase-SARAO Hartebeesthoek.
Umsebenzi we-HIRAX Ususemaphethelweni Okufaka Idishi eSizeni Esise-Karoo
Iphrojekthi i-Hydrogen and Real time Analysis eXperiment (i-HIRAX), eholwa yi-UKZN, iqopha umlando ekuphothulweni kokufakwa kwedishi e-Karoo ngokufaka nokuhlola imifanekiso yezipopolo e-South African Radio Astronomy Observatory (e-SARAO) e-Hartebeesthoek, eGauteng.
Okuyimifanekiso yilokhu, owokuqala wenziwe ngengilazoboya kanti omunye wenziwe nge-aluminiyamu, yomibili yenziwe ngokubambisana yi-NJV Consulting neRebcon zaseThekwini ne-MMS Technology yasePitoli, yaxhaswa ngemali yi-UKZN noMnyango wezeSayensi Nokusungula Okusha iyixhasa nge-National Research Foundation. Lezi zinkampani zibambisene nososayensi kulo msebenzi.
Umsebenzi we-HIRAX uhlose ukuklama sonke isibhakabhaka esiseningizimu ukubheka iminyakazo yomsindo, phecelezi baryon acoustic oscillations (BAOs), izinsalela zezinkanyezi ezindala okungasiza ukubheka ukuthi umlando womhlaba nokuqonda ngamndla asemkhathini. Loku kuzokwenzeka ngokucwaninga ama-fast radio bursts (FRB).
Ekugcineni kuzofakwa amadishi ayi-1 024 esizeni sase-HIRAX kwi-Square Kilometre Array (SKA) e-Karoo, okuyisinyathelo esimqoka ekuphothuleni ucwaningo ngento ososayensi abakholwa wukuthi iyimbangela yokwanda komhlaba.
I-HIRAX yaqala ukusebenzisana nezinkampani zendawo ngowezi-2018 ukwenza imicikilisho yokwenza idishi edingeka kulo msebenzi. Le mifanekiso yedishi engamamitha ayisithupha ubude iyajijeka, okuyindlela eyongayo eyenza ukuthi ithwebule isibhakabhaka iminyaka emihlanu. Amadishi ahlolwa e-SARAO ukuze kwenziwe okusele okuzofakwa emadishini angama-256 azofakwa e-Karoo.
Lo msebenzi we-HIRAX osezingeni eliphezulu kuthiwa yinto enkulu emkhankasweni weNingizimu Afrika endimeni yezinto ezithinta umkhathi nezinkanyezi ngenhloso yokugqugquzela ukubambisana phakathi ko,sosayensi.
UMcwaningi Omkhulu uSolwazi Kavilan Moodley ugcizelele udaba lwemizamo ye-HIRAX ukusimamisa amakhono obungoti eNingizimu Afrika ngokubambisana komkhakha wososayensi nemboni. Ithimba elenza umsebenzi lihlose ukwakha amathuluzi alo msebenzi ngokusebenzisa osonkontileka bendawo.
I-SARAO Hartesbeeshoek ixhase lo msebenzi ngamakhono namava ayo ekufakweni nasekuhlolweni kwemifanekiso emibili yamadishi.
Idishi yengilaziboya yakwa-MMS ikwazi ukuphenduka u-30 degrees nhlangothi zombili lapho ichonywe khona kanti yenziwe yaba sezingeni eliphezulu nakuba ingabizi, yenziwa yakwazi ukuphenduka kalula. Idishi ye-aluminiyamu yakwa-NJV Rebcon yenzelwe ukuthi ihlanganiseke futhi ihlakazeke kalula, kanti futhi ithwaleka iphinde ifakeke kalula.
USihlalo Wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities eNingizimu Afrika
USolwazi wase-UKZN Uqokelwe eBhodini Labahleli be-Journal of Retail and Marketing Review
Indlela Entsha Yokufundisa e-UKZN Kusetshenziswa Izindlela Zokufunda Ngobuchwepheshe
Ucwaningo Luveza Imiphumela Yokuhlala Ngasezindaweni Zokulahla Udoti